Sawirro: Turkey-ga oo mashaariic waa weyn ka hirgalinaya PUNTLAND | Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Turkey-ga oo mashaariic waa weyn ka hirgalinaya PUNTLAND
Sawirro: Turkey-ga oo mashaariic waa weyn ka hirgalinaya PUNTLAND
Garoowe (Caasimada Online) Magaalada Garoowe waxaa maanta oo Khamiis ah gaaray wafdi ka socda dowladda Turkiga.
Wafdiga waxaa hoggaaminaayay danjiraha Turkiga u qaabilsan Soomaaliya, Mr. Cemalettin Kani Torun, waxaana markii ay gaareen Garoowe halkaas ku soo dhaweyay madax ka tirsan maamulka Puntland.
Wafdiga waxa ay kulamo la qaateen mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland,oo uu ku jirro madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Kulankooda oo saxaafadda ay bannaanka ka joogtay ayaa markii uu soo dhammaaday waxa saxaafadda si wadajir ah u la hadlay madaxweyne Cabdiweli Gaas iyo danjire Kani Torun.
Madaxweyne Gaas ayaa ugu horreyn sheegay in uu ku faraxsan yahay wafdiga ka socda dowladda Turkiga, wuxuuna sheegay in ay ka hadleen siddii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeya Puntland iyo Turkiga.
Wuxuu kaloo sheegay in Turkiga dhawaan ay ka furan doonaan Garoowe xafiiska horrumarinta kaasoo lagala socon doono howlaha gargaarka ay ka wadaan Soomaaliya.
Danjiraha Turkiga u fadhiya Soomaaliya, Kani Torun ayaa isna sheegay in Turkiga uu mashaariic horrumarineed uu ka hirgalin doono deegannada Puntland.
Wuxuu sheegay oo kale in uu ku faraxsan yahay in markii labaad ay tahay oo uu soo booqdo deegannada Puntland.
Wafdiga ka hor inta aaney madaxweyne Gaas la kulmin waxa ay soo kormeeren goobo ku yaalla magaalada sidda Jaamacada Puntland, iyagoona dhegax dhigay Iskuulo lagu barto farsamada gacanta.
Markii ay ka dageen garoonka diyaaradaha Garoowe, waxaa halkaas ku soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland, kaddibna waxaa loo galbiyay xarunta madaxtooyada ee Garoowe, halkaas ay kulamo kula qaateen madaxweynaha maamulka Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali iyo qaar ka mid xubnaha maamulkiisa.
Turkiga ayaa hadda xoojinaya xiriirka uu la lee yahay maamulka Puntland, kaddib markii dhowr jeer ay Puntland ay ku eedeesay dowladda Soomaaliya in ay isku koobtay mashaariicda Turkiga uu ugu talagalay Soomaaliya.